Place de la démocratie 24 janvier 2009 | GAZETY_ADALADALA
Place de la démocratie 24 janvier 2009
Posted on 24/01/2009 by gazetyavylavitra
Tena mbola tsy afaka manoratra lava aloha androany fa raha hjijery ireo sary an-jatony azo teny Ambohijatovo, 13 mai, teny an-dalana ho any Ambodivona sy teny Ambodivona rahateo ianareo dia ** ity ** ny rohy.
Mbola ho avy manaraka eny ihany ny lahatsoratra. Fa ny azo lazaina aloha dia sahy i Bandikely, ary vonona koa ny vahoaka. Fa raha nisaina kely fotsiny ny mpitondra dia efa tany am-boalohany no novonoina tamin’ny alalan’ny fampisaotiana ‘fusibles’ ity hetsika ity. Efa tara loatra ankehitriny satria efa nivoaka daholo ny afera maloto nokoboniny, ary nitondran’ny sasany porofo an-tsary miaraka amin’ny Laharan’ny antontan-taratasy voapetraka tany amin’ny biraom-panjakana tany mihitsy.
Maro ny olona tonga teny: mpianatra, solontenan’ny faritra, solontenan’ireo raiamandreny be efa antitra, solontenan’ny foksionera…
LMifanome fotoana indray moa ny Ben’ny tanàna sy ny vahoaka amin’ny Alatsinainy ho avy izao amin’ny 10 ora eo amin’ny 13 mai.
Ny fangatahana kosa dia niova ho fametraham-pialan’ny governemanta iray manontolo, sy filazàn’ingahy Lemera fa vonona izy handray andraikitra hitantana ny ‘tetezamita’ raha omen’ny vahoaka andraikitra amin’izany.
Feno mpitandro filaminana sy fiara vitsivitsy tao amin’ny Gara, nefa kosa tsy nisy nilàna azy ireo mihitsy satria ny vahoaka samy mpilahatra ihany no nanampy ny mpikarakara ny hetsika tamin’ny fitandroana ny filamionana. Tanaty filaminana tanteraka ny zavatra rehetra. Toy izay hitako rha nandalo ny Shoprite Andravoahangy. Tsy nety nihidy ny varavaram-by teo amin’io fivarotana lehibe io, ka dia ny olona voatokana hitandro ny filaminana avy amin’ny mpilahatra ihany no tonga dia niaro ny toeram-pivarotana sy nanampy tamin’nay fampidinana ilay varavaram-by mba hikatona tanteraka. Minitra vitsy monja anefa izay fikatonana izay dia niverina nivoha ny Shoprite satria tsy nisy velively ny korontana, ary tsinjon’ny rehetra teny an-toerana ihany koa fa vahoaka milamina no nandalo sy nilahatra.
Eny amin’ny Foibe VIVA Ambodivona izany izao i Andry Rajoelina no mipetraka, arovan’ireo Andrimasompokonolona maro, manaraka ny rindran-damina voatokana ho azy ireo eo an-toerana eo.
Tsy navelan’ny vahoaka hody irery mantsy ny lehiolahy sao dia misy misambotra, hono, ka dia nateriny hatrany Ambodivona.
Ny tsy fantatro dia hoe : ao koa ve ny vadin’ingahy Ben’ny tanàna sa tsia, fa tsy salama noho ny tsindry hazolena nahazo azy tato anatin’ny herinandro mantsy, hono, ramatoa vadiny.
Ny filoha Ravalomanana kosa moa dia tsy eto Madagasikara fa lasa any Afrika Atsimo mandritra izany rehetra izany.
Nampanao fampiantsoana mpampahalala vaovao ny misistera isan-tokony voakasikky ny resaka filaminam-bahoaka, sy ny TIM, ka samy nilaza fa lainga daholo izay voalaza ka tsy tokony ho voarebireby amin’izany ny vahoaka. Ary miantso n y rehetra koa mba hanara-dalàna. Lalàna toy inona, ary lalàana natao ho an’iza?
Satria tokoa raha lalàna ihany no resahana, maninona no tsy mahazo manao fampitana sary sy feo maerana ny Nosy ny haino aman-jery hafa, ankoatra ny TVM sy ny MBS izay manasa atidoha ny mponina sy ny vahoaka Malagasy isan’andro hatrany amin’ny faritany any, efa ho an-taonany maro izao?
Amin’izay ny sary avoaka mbola ireny sary nandritra ny fotoana fiandrasana ireny, ka lazaina fa vitsy no tonga namaly ny antson’ny Ben’nyu tanàna.
Izany fomba fanao izany no efa nankaleo ny olona, sy tsy tiany intsony, nefa dia tsy azo nahitsy mialoha ve?
Aoka ho ahy ny hadisoana…
Filed under: Non classé | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, demokrasia, TVM, VIVA |
« Voaroaka hiala ny tanin’ny CUA ny MBS Affaire Andry Rajoelina, Alohalika ny ranom-bary »